Ketamine (ကီတာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ketamine (ကီတာမင်း)
Ketamine (ကီတာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ketamine (ကီတာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ketamine (ကီတာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ketamine သည် မေ့ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ketamine သည် သင့်အားခွဲစိတ်နေစဉ်အချိန်တွင် အိပ်ပျော်နေစေရန် ပြုလုပ်ပေးသလို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း နာကျင်ခြင်း၊ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်းတို့မှ သင့်အားကာကွယ်ပေးပါသည်။ အထက်ပါ အချက်မျာအပြင် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း ketamine ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Ketamine (ကီတာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ketamine ကို အသားထိုးဆေးအဖြစ် ကြွက်သားထဲထိုးနိုင်သလို အကြောထိုးဆေးအဖြစ်လည်း သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးနိုင်ပါသည်။ketamine ကို ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းတွင် ထိုးရပါမည်။ သင့်အား ketamine ပေးထားစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးတွင် သင်၏ အသက်ရှုနှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်မှု နှင့် အခြားသော အရေးကြီး အချက်များကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေ့ဆေးမှ ပြန်လည် သတိရလာချိန်တွင် အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ထဲတွင် ထူးဆန်းနေခြင်းတို့ကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ခံစားမှုများမှာ ဆိုးရွားပြီး မခံနိုင်အောင်ဖြစ်လျှင် သင့်အား ပြုစုပေးနေသူကို အသိပေးပါ။ အိမ်တွင် ဆေးထိုးရန် သင့်အား ပြသပေးလိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ဆေးကို မည်သို့ထိုးရမည်ကို သေချာစွာမသိလျှင်၊အသုံးပြုပြီးသား ဆေးထိုးအပ်နှင့် အခြား ပစ္စည်းများကို မည်သို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်ကို မသိလျှင် မိမိဖာသာ လုံးဝဆေးမထိုးရပါ။
Ketamine (ကီတာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ketamine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ ketamine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ketamine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ketamine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ketamine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Ketamine (ကီတာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးကို အသုံးမပြုမီ အောက်ပါအချက်များရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ပတ်အတွင်း MAO inhibitor ဆေးများကို သောက်မိလျှင်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဓါတ်ပြုခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။MAO inhibitor ဆေးများမှာ isocarboxazid, linezolid, methylene blue, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromie နှင့် အခြားသော ဆေးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
မရှေးမနှောင်းကာလက အရက်ပမာဏ များပြားစွာ သောက်ထားခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ketamine (ကီတာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် N ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Ketamine (ကီတာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ketamine အသုံးပြုပြီးနောက် ၂၄နာရီအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါကဆရာဝန်ကို အမြန်အကြောင်းကြားရမည်။
ပြင်းထန်စွာ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊မူမမှန်သော အတွေးများ ပေါ်လာခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း။
မူးဝေပြီး မေ့လဲသွားတော့မယောင် ခံစားရခြင်း။
နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုအားနည်းခြင်း။
ကြွက်သားများ မူမမှန် အကြောဆွဲနေသဖြင့် တက်နေသည်ဟု ထင်ရခြင်း။
အိပ်မက် မက်နေသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Ketamine (ကီတာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ketamine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ketamine (ကီတာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ketamine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ketamine (ကီတာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ketamine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အသက်ရှုအလွန် နှေးခြင်း —–> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့် သတိထားသုံးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ketamine (ကီတာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ketamine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
စတင်ပေးခြင်း : 1 – 4.5 mg/kg သို့မဟုတ် 1 –2mg/kg ပမာဏကို 0.5 mg/kg/min နှုန်းဖြင့်ပေးရမည်။(2 mg/kg ပမာဏပေးလျှင် ပေးပြီး စက္ကန့်၃၀အတွင်း မေ့ဆေးအာနိသင် ရရှိကာ ၅မိနစ်မှ ၁၀မိနစ်အထိ အာနိသင် သက်ရောက်ပါသည်)။
6.5 – 13 mg/kg : (9 – 13 mg/kg ပမာဏပေးလျှင် ပေးပြီး ၃ – ၄ မိနစ်အတွင်း မေ့ဆေးအာနိသင် ရရှိကာ ၁၂မိနစ်မှ ၂၅မိနစ်အထိ အာနိသင် သက်ရောက်ပါသည်)။
ကလေးတွေအတွက် Ketamine (ကီတာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Ketamine (ကီတာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အကြောထိုးဆေး၊အသားထိုးဆေး : 10mg/ml, 50 mg/ml, 100 mg/ml.
သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အာသီးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်သလဲ ။။